Blockchain News 29.08.2018 - Blockchain News
EyeThupha 29, 2018 admin
Square iphumelele patent inethiwekhi yentlawulo crypto
Digital Iintlawulo eqinile Square iye yaphumelela igunya womnatha yentlawulo a evumela abarhwebi ukuba bayazamkela iintlawulo e Bitcoin. Le nkqubo ivumela abathengisi ukuba ukwamkela cryptocurrencies kunye iindlela intlawulo eqhelekileyo cash xa lwemali yabo yokuzikhethela. Square ekugqibeleni udibanise iintlawulo cryptocurrency kwinkqubo walo wokudla POS esizokwenza izigidi abarhwebi ukwamkela Bitcoin ngaphandle kokuba eyayifakwe kwenye iprosesa yentlawulo okanye ngesandla ukuguqula imali cryptocurrency ibe eyake.
Kuyaphawuleka, elilodwa lomenzi babesiva inkqubo evumela inkqubo POS ukuphelisa engenamnini kweentengiselwano cryptocurrency. Inkonzo Intlawulo iya kukwenza oku ngokuthi nokugcina blockchain labucala ukuba ubhala imicimbi ukusuka KDE Square-elawulwa okwixesha-lokwenene, oku ukubeka ecaleni ngokupheleleyo lokuhlaselwa lenkcitho kabini, kodwa kona ukuba umngcipheko ukususela yomthengisi inkonzo yentlawulo. I-patent ngokwalo kuquka imizobo yamagunya basenokubonakala Bitcoin iintlawulo ebulawa nge Square ka-peer-to-peer Cash App.
Hong Kong kudala visa option for blockchain abafuna umsebenzi
Ngoku Hong Kong yenza kube lula ukuba iingcaphephe blockchain ukufumana visa. I Hong Kong uhulumeni likhuphe uluhlu italente ngoLwesibini ukuba iindidi ngeendidi 11 ukuzibonakalisa ukuba ngoku abafanele ukufumana amanqaku bonus. Iskimu visa ivumela izicelo abaphumeleleyo ukungena zize zihlale kulo mmandla ekhethekileyo Chinese zolawulo ngaphandle kokuba kufumaneke kuqala kokuba ewunikiwe loo msebenzi evela kumqeshi lendawo.
“I-Scheme i inkqubo yokungena quota-based. Ifuna ukutsala abantu abanezakhono eziphezulu okanye unekhono ukuhlala e-Hong Kong ukuze ukwandisa ukhuphiswano kwezoqoqosho Hong Kong i-,” njengoko inkcazo yenkqubo. ukuze ufanelekele, iingcali blockchain kufuneka ukubamba ubuncinane isidanga, uno lwazi nge mveliso eziphawulekayo endle, kwaye akwazi ukusebenzisa indlela blockchain kwiinkonzo zemali.
Ingxelo Daily Market Kraken for 28.08.2018
$140M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Hey Daily Team Altcoin, A new...
Post Previous:Blockchain News 28.08.2018
Post Next:Blockchain News 30.08.2018